Zurich-Montego Bay serivisy fijanonana tsy misy fiatoana mpanova lalao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Zurich-Montego Bay serivisy fijanonana tsy misy fiatoana mpanova lalao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Nathania Hall, izay niaraka tamin'i Sanchia Gordon-Hall reniny no voalohany nilahatra tamin'ny sidina voalohany tsy an-kijanona avy any Zurich mankany Montego Bay ny alatsinainy 5 jolay lasa teo, nahazo fiarahabana mifanaraka amin'ny COVID-19 avy amin'ny minisitry ny fizahantany, Hon Edmund Bartlett. Ny Halls dia Jamaikana monina ao Austria.
Ny sidina mivantana omaly alina (5 jolay) teo anelanelan'ny tanàna ara-bola soisa, Zurich sy Montego Bay, dia manamarika ny fampidirana ny fandaharana fiaramanidina lehibe izay nohajaina ho mpanakalo lalao ho an'ny indostrian'ny fizahantany ao Jamaika.
Nilaza ny minisitry ny fizahantany Bartlett fa ny sidina voalohany eo anelanelan'ny Zurich sy Montego Bay dia hampiroborobo ny fifandraisana eo amin'io faritra io any Eropa.
Ny fangatahana ho an'i Jamaika dia mifantoka kokoa ary ny firenena tsirairay avy dia manana fahaizana mitondra nomerao.
I Jamaika dia tsy hita fotsiny ho ivon-toeran'ny fialan-tsasatra ho an'ny kilasy toekarena fa ho an'ny demografika tsara volo sy mendrika ambony.
Minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett, dia nanambara ny serivisy ho "mpanakalo lalao amin'ny resaka fanamafisana ny fifandraisana avy any amin'io faritra any Eropa io", taorian'ny niarahabany ny kapiteny Patrick Ritter sy ny ekipan'ny sidina Edelweiss Airline, izay nitondra mpandeha 99 tamin'ny diany nanokafana azy. Raha niresaka momba ny maha-zava-dehibe azy ny Minisitra dia nilaza hoe: "Ankehitriny hitantsika fa mifantoka bebe kokoa ny fangatahana an'i Jamaika ary ny firenena tsirairay dia manana fahaizana mitondra nomerao ampy hitondra fiaramanidina tsy miato mankany Montego Bay."
Notsiahivina ny fotoana, ka nanolotra fanomezana ho an'i Capt. Ritter izay manavao ny olom-pantany amin'i Montego Bay ny minisitra Bartlett. Miaraka amin'ny fahatsiarovana ny nahatongavako teto 15 taona lasa izay ary nifalifaly, ho azy ny fiverenana dia "fifaliana lehibe".
Zurich dia iray amin'ireo tanàna manankarena indrindra any Eropa ary hitan'Andriamatoa Bartlett ny fahalianana tonga ao Jamaika toy ny “fanambarana lehibe iray fa i Jamaica dia tsy hita fotsiny ho ivon-toerana fialan-tsasatra ho an'ny kilasy toekarena fa ho an'ireo olona tsara volo sy demografika mendrika ihany koa.” Nilaza izy fa manan-danja izany satria miteraka fahatokisan-tena bebe kokoa amin'ny fananganana ambaratonga avo kokoa "mba hahazoana antoka ny loharanom-bola izay hijanona ao Jamaika hanampy antsika amin'ny fananganana toekarena."
Tamin'ny fandraisana ny serivisy, talen'ny fizahan-tany, Donovan White dia nilaza fa ny Birao Mpizahatany ao Jamaika (JTB) dia niasa tsy tapaka hanintona ireo mpitsidika, na dia teo aza ny valanaretina COVID-19. “Miasa mafy izahay amin'ny fangatahana noforoninay, ary tsy nitsitsy ezaka izahay teo amin'ny tsena mba hahazoana antoka fa napetraka i Jamaika ho iray amin'ireo toeran-kaleha tsara indrindra misy ho an'ireo mpandeha izay vonona ny hanao dia », hoy izy.
Nilaza Andriamatoa White taorian'ny nanombohan'ny areti-mifindra tamin'ny taon-dasa, "Jamaica sy ny Tourist Board dia namorona fanehoan-kevitra bebe kokoa momba ilay toerana naleha noho izay noforonintsika tamin'ny fotoana hafa teo amin'ny tantarantsika ary niniantsika natao izany satria mila mahazo antoka isika fa namakivaky ilay valanaretina izahay ary nivoaka avy tao, fa afaka nanolotra an'i Jamaika tamin'ny fomba iray izay hanohy hitarika izany fangatahana izany izahay. ”
Edelweiss dia ekena ho zotram-piaramanidina fitsangatsanganana any Suisse, miaraka amin'ny sidina avy any Zurich mankany amin'ny toerana 70.
Mandritra izany fotoana izany, ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Sangster indray dia mihetsiketsika miaraka amina hetsika miaraka amina sidina vaovao marobe mankany Jamaika.
Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny MBJ Airports Ltd., Shane Munroe dia nilaza fa mandeha ny fanarenana fizahan-tany miaraka amin'ny hetsika ao amin'ny seranam-piaramanidina manomboka amin'ny 30 isan-jato amin'ny volana Janoary ka hatramin'ny 70 isan-jato amin'ny faran'ny volana Jona, raha ampitahaina amin'ny 2019 ary "amin'ny fahavaratra dia toa tsara ny fanantenana ny ankamaroany dia avy any Etazonia. ” Nanampy izy fa 80 isanjaton'ny mpiasa ao amin'ny seranam-piaramanidina no miverina miasa.
Nilaza izy fa volana matanjaka ny volana Jona miaraka amin'ireo mpandeha 200,000 XNUMX tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina ary isa marobe no antenaina amin'ny volana Jolay sy Aogositra, ny tampon'ny fahavaratra, "ary ny fomba fijerin'ny vanim-potoana ririnina dia tsara. Amin'izao fotoana izao dia tsy manana sidina eoropeana miditra izahay ka rehefa ampidirinao ny sidina avy any TUI, sidina avy any Canada izay miverina miadana, UK koa, azo antoka fa efa akaiky ny fanarenana. ”